समग्र नरैनापुरको विकासको लागि समर्पित छुु : अध्यक्ष शाह - Sadarline
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन २४, २०७६ | 300 Views ||
मोहम्मद ईस्तियाक अहमद शाह, नरैनापुर गाउपालिकाका अध्यक्ष हुन । उनलाई स्थानीयबासीले सम्भु मियाँ उपनामले पनि चिन्ने गरेका छन् । उनीसंग नरैनापुर गाउपालिकाको विकास निर्माण र हालको अवस्थाको बारेमा केन्द्रीत रहदै सदरलाइन डट कमका लागि रुद्र सुवेदी र सिता खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
अहिले तपाइको स्थानीय तहले कसरी काम गरि रहेको छ ?
नरैनापुर सदियौदेखि विकासको भोको छ । यहाँ राज्यको सबै संयन्त्र भएर पनि राज्यबाट टाढा रहन विबस पारिदै हेपाह प्रबृत्तिको शिकार बन्दै यहाँसम्म आएका छौ । हामीकहाँ एक वर्ष अघिसम्म एक मिटर पनि पक्कि बाटो थिएन । स्वास्थ्यको कुरै नगरौ, विद्युतको पोल र तार छ तर, करेन्ट छैन । समग्रमा भन्दा नरैनापुर विकास भन्दा कैयौ कोश टाढा भएको अवस्थालाई जसोतसो समेट्दै जनताको भावना अनुरुप उनीहरुको माग अनुसार काम गर्दै आइरहेका छौ । बाटोघाटो पुलपुलेसा निर्माण कार्य गर्दैै आएका छौ । पहिलेको भन्दा अहिले धेरै विकासमा अगाडि बढेको छ ।
जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि जनताले विकासको खासै अनुभूति गर्न पाएका छैनन किन ?
विकासको नाममा बाटो छैन, विद्युत छैन, टेलिफोन पनि गुणस्तरिय छैन, विद्यालयको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । स्वास्थ्यको कुरै नगरौ तर, पनि हामी निर्वाचित भएर आएपछि । हाम्रो बलबुताले भेटेजति गरेका छौ । जनताले बिकासको अनुभुति गर्ने गरी काम गर्न सुरु गरेका छौ । किनभने पहिले भन्दा अहिले बाटोघाटोको बिस्तार गरेका छौ । शिक्षालाई पनि मुख्य प्राथमिकता दिएका छौ । नेपालगञ्ज धाउन नपर्ने गरि यहाबाट नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका छौ । अब केही कुरामा कसैको चित्त बुझाउन सकियन होला नत्र हामीले विकासको शुन्य अवस्थाबाट काम सुरु गरेका छौ ।
तपाइहरुले सेवा प्रवाहमा पनि खासै ध्यान पु¥याउन नसकेको गुनासा छन नी ?
हामिले नरैनापुरलाई एउटा मोडेल गाउँपालिका बनाउने उद्देश्य राखेका छौ । राज्यले दुर्घम गाउपालिका घोषणा गरेको छ नरैनापुरलाई तर घोषणा गरेर मात्र भएन नी त्यो अनुसारको सेवा सुविधा पनि खास गरी विकास बजेट बढाउनु पर्यो नि त्यो हुन सकेको छैन । गम्छाले पुरा शरिर ओढ्न नसके झै केन्द्र र प्रदेश सरकारले शरिर अनुसारको विकासे गम्छा दिनु परो नि । तै पनि जति मिलेको त्यसलाई दामासाहीले आवश्यकता अनुसार काम गरेका छौ । काम गर्दै जाँदा केही सानातिना गुनासा आउछन तीनलाई पनि सम्बोधन गर्दै जाने छौ ।
४. विकासको काममा भन्दा पनि आर्थिक आर्जन गर्नमा नै जनप्रतिनिधिहरु लिप्त भइरहेका छन् भन्ने आरोपका बारेमा के भन्नुुहुन्छ ?
हाम्रो गाउपालिका सुगम भित्रको दुर्गम भएको कारण हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिकाको विकासमै खटिरहेका छौ । हाम्रो मुल लक्ष्य नै आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने भएकोले जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गरिएको छ । म र मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधिले विकासको भोको नरैनापुरको सेवा नै पहिलो काम हो भन्ने ध्ययका साथ विकासको काममा जुटेका छौ । काम गर्दै जाने दौरानमा केही त्रुटी भएको भए हामी सच्याउदै अघि बढ्ने छौ । तर, जहासम्म कमाई गर्ने कुरा छ । हामीले जनातको काम गर्दा आशिस कमाएका छौ कही कतै गालि पनि कमाएका हौला बस त्यती नै हो ।
. तपाइको गाउपालिकालाई समृद्ध बनाउन विशेष केहि योजना लागू गर्नुभएको छ की ?
नरैनापुर एकआपसमा मिलेर बिकास गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई विस्तार गर्नंंं+२ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौ । स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न १५ शैयाको हस्पिटल लामो समयको अन्तरालपछि निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन तयारीमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधुनिक क्रिकेट रङशाला निर्माण गर्ने योजना निर्माण गरी तयारी सुरु भएको छ । केन्द्र सरकारसम्म पुगेर रङगशालासम्म पुग्ने बाटोको काम शुरु गरेका छौ । हिजो १ मिटर पनि पक्की बाटो थिएन आज हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा छ । यसका साथै वडा–वडामा जोड्ने लिंक सडक निर्माणको क्रममा छन् केही सम्पन्न पनि भईसके । अहिले हाम्रो जोड शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको लागि प्रयास रहेको छ ।
.केन्द्र सरकारले सिहदरवार गाउमा पुगेको हल्ला फिजाइरहेको छ , के साच्चै सिहदरबार गाउमा पुग्न सकेको छ त ?
सरकारबाट सिंहदरबार गाउमा आएको भन्ने कुरा भनाइमा मात्र लागु भएको छ कार्यन्वयनमा लागु हुन सकेको छैन । अधिकारका कुरा गरियो तर न बजेट पठाईयो न अधिकार दिने कुरा कार्यन्वयन नै भयो । कर्मचारीको अभाव, भएका कर्मचारी विकटताको कारण लामो समय नटिक्ने, विद्युत र ईन्टरनेट साथै टेलिफोनको गुणस्तरियता नहँुदा अझैपनि साना भन्दा सानो कामको लागि पनि नेपालगन्ज नै दौडनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीय सरकारबाट हुने कामको लागि नेपालगन्ज जानुपरेपछि कसरी आउछ सिहदरबार गाउमा ?
नीति निर्माण र कानुन बनाउने सबालमा के गरि रहनु भएको छ ?
नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्दै केन्द्र र प्रदेशसंग नबाझिने गरी अगाडि बढेका छौ । हामी राज्यको अत्यन्त हेपाईमा परेको कारणले पनि यहाँको पहिलो प्रथामिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल र विद्युतीकरण हो । तै पनि हामीहरु आवश्यकता हेरी नीति ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छौ ।
विकास निर्माणदेखि कानुन बनाउने सबालमा केन्द्रीय सरकारबाट कतिको सहयोग पाइ रहनु भएको छ ?
केन्द्रीय सरकारबाट दुर्गम क्षेत्र घोषणा गर्ने बाहेक अरु त्यस्तो कुनै सहयोग आएको छैन । दुर्गम क्षेत्र घोषणा नै केन्द्रको सेवा सुविधा हो भने त्यसको आवश्यकता पनि छैन। अहिले हामीलाई सबै भन्दा बढी चिन्ताको विषय भारतले एकतर्फी रुपमा दश गजामा बनाएको सीमा बाँध सडकको कारण नरैनापुर डुवानमा परी बाढीको समस्या निम्तिएको छ । त्यसको कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न आवश्यक छ । अर्कोतिर बाटो तथा बिजुली बत्तिको पहुँचका लागि सरकारबाट नै ध्यान पुगेको छैन् । यसले गर्दा बिस पच्चिस बर्षदेखि अन्धकारमा रहेको नरैनापुर अब पनि अन्धकारका रहन्छ कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । यी समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्र सरकारले पहल गरिदिन आवश्यक छ ।
तपाइको स्थानीय तहले भोग्नु परेका मुख्य समस्याहरु केके हुन् ?
सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सडक सञ्जाल नहुनु, भारतले बनाएको सीमा बाँध सडकको कारण बाढीको समस्या, विजुली बत्ति नहुनु, गुणस्तरिय टेलिफोन सेवा नहुनु हो । गत हप्ता अएको वर्षातका कारण मात्रै झन्डै हजार घर प्रभावित भएको र अन्नबाली नष्ट भएको छ । पानीको निकास नभएकोले मानविय क्षति हुन सक्ने ठुलो समस्याको रुपमा रहेको छ । तसर्थ नरैनापुरको बिकासका लागि अहिले सहयोगी हातहरुको खाँचो छ । त्यस्ता सहयोगी हातहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु । सरकारको पनि यसमा ध्यनाकर्षण गराउन चाहन्छु । नरैनापुर बाँकेको सुघम भित्रको दुर्घम गाउपालिकाका जनताले विद्युत, टेलिफोन, शिक्षा, बाटो र स्वास्थ्यको लागि अन्य स्थानको हेरेर चित्त बुझाउन नपर्ने गरी सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन २४, २०७६ 3:10:05 PM |
Posted in ताजा समाचार, विकास निर्माण, विचार, समाचार
Prevनेपालगन्जको गुरुद्वारा अगाडिका फर्निचर पसलमा भिषण आगलागी
Nextसर्पले डस्दा एकै परिवारका दुईको मृत्यु